Xildhibaan Muudey “Dagaalkii Shabellaha Dhexe waa lagu kala baxay” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xildhibaan Muudey “Dagaalkii Shabellaha Dhexe waa lagu kala baxay”
Xildhibaan Muudey “Dagaalkii Shabellaha Dhexe waa lagu kala baxay”
Xildhibaan Xasan Cabdulqaadir Muudey oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle ayaa ka hadlay dagaalka culus ee maanta ka dhacay deegaanada dhaca Bariga Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Xildhibaan Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa sheegay in hawlgalkii ka bilowday deegaanka Warta Jilible uu ku fiday deegaanada Aqab-duco, Waraxleey iyo tuulooyin kale oo hoos-tagga deegaanka Alkowthar.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay in hawlgalka uu soo geba-gaboobay caawa, ka dib markii dagaalka lagu jebiyay Shabaabka, lagana saaray sida uu sheegay deegaano ay horey u jooggeen.
“Hawlgaladii saakay ka bilowday Gobolka Shabellaha Dhexe waxa uu soo geba-gaboobay caawa, iyadoona khasaaro badan lagu gaarsiiyay nabadiidka.” Ayuu yiri Xildhibaan Xasan Cabdulqaadir oo la hadlay Universaltv.
Xildhibaan Muudey ayaa yiri “Hawlgalada waxay suurageliyeen in la qabto deegaano horey ugu jiray gacanta cadowga, oo dhibaato fara-badan ku hayay dadkeena ku dhaqan deegaanadeena hodanka ah.”
Waxa kaloo uu yiri “Ciidanka Xoogga Dalka iyo Booliska Hirshabelle waxaan ku bogaadinayaa naf hurnimada ay sameynayaan iyo dadaalka ay ugu jiraan, sidii ay dalka uga xoreyn lahaayen kooxaha nabadiidka.”
Sidoo kale waxaa uu sheegay, sida uu qorshuhu yahay in hawlgalku sii socon doono, illaa iyo inta maleeshiyada Al Shabaab laga sifeynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi.
Dhanka kale Xildhibaan Muudey ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Taliyahii Ururka 6aad ee Kumaandooska Gorgor, Gaashaanle Maxamed Cabdiwahaab Faarax oo dagaalkii maanta ku dhintay.
Hawlgalkan oo aanay qayb ka ahayn Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa hoggaaminaya Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage.
Previous articleRooble “Gaashaanle Maxamed Cabdiwaaxid wuxuu u geeriyooday difaaca dalka”
Next articleGalmudug oo mamnuucday qaadka dhanka dhulka lagu keeno deegaanadeeda